I’m A Villa Fan And I’m Scared!│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
Posted Articles Title : I’m A Villa Fan And I’m Scared!
■Link To This Post (HTML code) : I’m A Villa Fan And I’m Scared!
■Trackback URL : I’m A Villa Fan And I’m Scared!
Grunion ပြေးသည် ‘ San Diego မှသင်၏လက်နှင့်အတူငါးဖမ်း
ရပ်ပါ & လမ်းကြောင်းမှဝေးလုံခြုံစွာနေရန်
အားကစားရွှံ့စေးသိကောင်းစရာများ : လစဉ်ထုတ်ဝေမှုများ : Paragon အားကစားကျောင်း
Eriksson သည်လှည့်စားခံခဲ့ရသည် (သို့) မခံခဲ့ရပါ?
တောင်တက်စက်ဘီးစီးစဉ်တွင်ပြင်ဆင်နေစဉ်တွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းသည်လုံးဝမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ကြီးမားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတစ်ခုမှာသင်စီစဉ်ထားသည့်အကူအညီမှဝေးကွာသောတောင်တက်စက်ဘီးပစ္စည်းကိရိယာများကိုအမြဲထုပ်ပိုးရန်ဖြစ်သည်. သင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်ထားသောတောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်း၏ကျွမ်းကျင်မှုမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူသင်စဉ်းစားသင့်သည့်အရေးကြီးသောအချက်အချို့ရှိပါသည်. ပထမ ဦး ဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစား, တောင်တက်ခြင်းနှင့်မဆိုင်ဘဲအိမ်ပြင်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်စီစဉ်သူမည်သူမဆိုအတွက်, ကောင်းစွာသိုလှောင်ထားသောပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီကိရိယာအစုံရှိသင့်သည်. သင် biker သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်, သေးငယ်တဲ့အထုပ်ထဲမှာကောင်းကောင်း fit ရန်ရည်ရွယ်ဒီဇိုင်းနေကြသည်, ထိုင်ခုံအောက်မှာသို့မဟုတ် saddlebags ၌တည်၏. ကောင်းစွာသိုလှောင်ထားသည့်ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာတွင်ပိုးသတ်ဆေးပါလိမ့်မည်, နာကျင်မှုသက်သာစေ, tensor ပတ်, တီးဝိုင်း - အထောက်အကူ, ကလောင်အမည်, နှင့် pinzers. ဒုတိယလိုအပ်ချက်မှာစက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်သီးခြားကိရိယာအစုံအလင်ပါရှိရန်နှင့်သင်တွင်ရှိသောစက်ဘီးအမျိုးအစားနှင့်သင်လိုချင်သည့်ကိရိယာများအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။. အခြေခံအကျဆုံးကိရိယာတန်ဆာပလာများသည်ပြားချပ်ချပ်တာယာကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောကိရိယာများရှိသင့်ပြီးသင့်ထိုင်ခုံအောက်တွင်သို့မဟုတ်ကုန်းနှီးအိတ်ထဲတွင်အဆင်သင့်အနေအထားရှိသင့်သည်။. ရှာဖွေရန်အခြားကိရိယာများသည်အယ်လန်သော့သို့မဟုတ်သေးငယ်သည့်လိမ်ဖဲ့ခြင်းဖြစ်သည်, ကွင်းဆက်အနိုင်အထက်, တစ် ဦး တာယာ gauge, ဆွစ်စစ်တပ်ဓား, နှင့်အချို့သောခိုင်မာတဲ့တိပ်. အခြားအထူးအကြံပြုထားသည့်တောင်တက်စက်ဘီးစီးစက်တွင်အပိုတောင်တက်စက်ဘီးကြိုးတစ်ခုဖြစ်သည်. မည်သည့်အတွေ့အကြုံရှိစက်ဘီးသမားမဆိုလမ်းကြောင်း၏ကွင်းဆက်နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကြောင့်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုကောင်းစွာသိသည်. များသောအားဖြင့်ကျိုးပဲ့နေသောကွင်းဆက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ သို့သော်တစ်ခုမပါဘဲ ထား၍ မထားပါနှင့်. အနည်းဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ခရီးဆောင်လေပန့်တစ်ခုပါ. ဤပန့်များသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပြီးသင့်စက်ဘီးနှင့်လိုက်ဖက်ရန်အထူး ၀ ယ်နိုင်သည်. အများစုမှာထိုင်ခုံအောက်သို့မဟုတ်ကုန်းနှီးအိတ်ထဲတွင်တပ်နိုင်သည်, မကြာခဏပြုပြင်ကိရိယာအစုံတစ်ခုပါဝင်သည်. ဤပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးသည်ပေါ့ပါး။ သင့်စက်ဘီးတွင်အလွယ်တကူသိမ်းဆည်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. လက်ျာတောင်ပေါ်စက်ဘီးစီးသည့်စက်ကိရိယာများဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်သင့်အားနာရီများစွာစိတ်ပျက်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုအကူအညီမပါဘဲဝေးဝေးခရီးမသွားပါနှင့်. လိုအပ်သောတောင်တက်စက်ဘီး
It all depends on your feet. အခြေခံအားဖြင့်, golf shoe or not, shoes must be comfortable to wear and should fit good. ဒါ့အပြင်, the shoes should fit your budget as well as your lifestyle. Out with the old Old golf shoes have those spikes that are made out of metal. These types of foot wear are no longer allowed on the golf greens. Throw them out and getanew pair of great golf shoes. Current makers of golf shoes use spikes that are soft and made of plastic. Brand it or not The brand is not as important compared to fit, comfort and style. You may have the shoes that Tiger Woods wears but that does not mean you will play like him if you wear the brand of shoes he wears. Be realistic. If you prefer the slip-on golf shoes rather than the ones that you have to tie, go and get those. It is your opinion and preference that counts more than anything else. Listen to what your feet are telling you. Why are they on sale? Golf shoes are different and unique. Though you could simply settle for any shoe that fits or any shoe that looks good because they fit your budget, this should not be the only consideration. Take this as an example,agolfer once boughtapair of golf shoes simply because they were on sale. Lo and behold when the golfer tried it on the actual greens, he found out that it wasapain to the feet and very difficult to keep on as well as to tie. So please do not forget to try it out first. Your feet would know better and then let your wallet speak after your feet have decided on the shoes. Walk around the store with the shoes you are intent to purchase. Make sure though that you also try on other pairs. Know your real golf self However, if you do not play golf very much, it is best that you purchase the kind of shoes that just as well do not cost as much. But if you areadevoted golfer, shoes that are waterproof is the best option. These shoes are good for walking as well as sloshing along the greens. But if you areagolfer that is not so serious in playing and you enjoy the walking over the hills, around trees and tees more than playing or putting, then going waterproof may not be an option for you. How To Find The Golf Shoe That Is Right For You
အွန်လိုင်း Poker သည် Game တွင် Interst ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေသည်
မည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုနားလည်လေ, ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကဖြစ်လာသည်. ဤဆောင်းပါးကိုသင်ဖတ်ရှုသောအခါအင်တာနက်ဖဲချပ်၏အကြောင်းအရာသည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်. Oline Poker သည်ယနေ့အင်တာနက်ပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်. sign up လုပ်ပြီး logging လုပ်တဲ့သူအရေအတွက်တိုးလာတာနဲ့အတူ, ဂိမ်းတစ်ခုပင်ကျယ်ပြန့်အကျိုးစီးပွားလာပါတယ်. သင်ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုသောအတွေ့အကြုံရှိကစားသမားတစ် ဦး လား, ဤနည်းအားဖြင့်, အွန်လိုင်းအခန်းများနှင့်အခြားကစားသမားများ၏အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များမှတဆင့်အတွေ့အကြုံရရှိမှု, သို့မဟုတ်သင်၏ဂိမ်းတိုးတက်ရန်နှင့်သင်၏နည်းဗျူဟာအပေါ်ရှုထောင့်ရဖို့လိုတဲ့ဝါရင့်ကစားသမား, World Wide Web ဖြင့်ကစားသောအခါသင်၏ရွေးချယ်မှုများသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်. ပြည်မကြီးပြိုင်ပွဲများ၌ကြီးထွားလာသောဆုများနှင့်အတူ, နှင့်ဤပြိုင်ပွဲမှမြှုပ်နှံရုပ်မြင်သံကြားလွှမ်းခြုံတိုးမြှင့်, အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဝေခန်းများသည်ယခုအခါဂိမ်းတစ်ခုလုံးကိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားလာစေသည်. ဖဲချပ်ဝေ၏လူကြိုက်များအဖြစ်, အွန်လိုင်းအခန်းအရေအတွက်လည်းတိုးပွားလာသည်. အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဝေခန်းများသည်လုံခြုံသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများဖြစ်သည်, မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခု, ကျပန်းကဒ်ကိစ္စ, ဘေးကင်းလုံခြုံကစားပတ်ဝန်းကျင်, နှင့်လက်တွေ့ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံ. သ, အင်တာနက်ဖဲချပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်. အောက်ပါအချက်အလက်များသည် ပို၍ ပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်ဟုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်. အွန်လိုင်းမှာလူတွေသိကျွမ်းဖို့လူများစွာကိုလည်းသူတို့ကပေးတယ်, ထင်မြင်ချက်များနှင့်မဟာဗျူဟာများဆွေးနွေးပါ, နှင့်ကစားသမားများပိုမိုတစ်နေရာတည်း၌တွေ့ဆုံရန်စရာမလိုဘဲကမ္ဘာအနှံ့ကနေဂိမ်းထဲမှာပါဝင်ရန်အခွင့်အလမ်း. အချို့သောအွန်လိုင်းခန်းများသည်အခြားသူများထက် ပို၍ အသေးစိတ်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးအလွန်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဂရပ်ဖစ်ပါရှိပါတယ်, စိတ်လှုပ်ရှားစရာမြှင့်တင်ရေးအခွင့်အလမ်းများ, နှင့်အလွန်ရက်ရောဆုကြေးငွေ. ရရှိနိုင်သည့်အွန်လိုင်းဖဲချပ်ခန်းအတော်များများသည်သင်၏ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာပေးသည်. ဤရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုသည်ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရရှိနိုင်သော software ဖြစ်သည်, နောက်တဖန်, ကမ္ဘာအနှံ့မှကစားသမားများအနေဖြင့်ဂိမ်းတွင်ပါဝင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုကျယ်ပြန့်စေသည်. အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဝေခန်းအချို့မှကမ်းလှမ်းထားသောအခြားရွေးချယ်စရာများမှာအခမဲ့လိပ်များပါဝင်သည်, လွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေ, နှင့်အသစ်သောအကောင့်ဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူရိုးရာသစ္စာရှိမှု. အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းသောအင်္ဂါရပ်များသည်အင်တာနက်ပေါ်မှကစားခြင်းကို ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းစေသည်, ဆိုက်၏သုံးစွဲသူပမာဏကိုချဲ့ရန်လည်းကူညီနိုင်သည်. ဒါ့အပြင်, အွန်လိုင်းဆိုဒ်များစွာမှကမ်းလှမ်းသောအခြားအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ကစားသမားကိုမည်သည့်ဖဲချပ်အားရွေးလိုသည်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်, သူတို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပြောင်းနိုင်အောင်ခွင့်ပြုထားတယ်. အထက်ပါအချက်များကိုသုံးသပ်ရန်အချိန်ယူပါ. သင်လေ့လာလိုက်တာတွေကအရေးယူဖို့မဆိုင်းမတွကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်. စတိဗ် အွန်လိုင်း Poker သည် Game တွင် Interst ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေသည်
ဝါးနှင့် Split ကိုကြံလှံတံ
ခေတ်မီနည်းပညာများသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူ။ အဆင်ပြေသောအရာများကိုများစွာတီထွင်ခဲ့သည်. ငါးဖမ်းရန်ကိုနှစ်သက်သောငါးဖမ်းသမားများအတွက်, ခေတ်သစ်နည်းပညာ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုတစ်ခုယင်ကောင်ငါးဖမ်းလှံတံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူထင်ရှားသည်. မူလက, ယင်ကောင်များမှငါးမျှားများကိုဝါးနှင့်ကြံခွဲထားသည်. ဒါပေမယ့်ဝါးမတိုင်မီကယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်းအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်, ၎င်းသည်အစိမ်းရောင်နှလုံးဟုခေါ်သည့်အပူပိုင်းသစ်တောဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရုတ်နိုင်ငံဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်တွင်တွေ့နိုင်ပြီးယင်ကောင်ငါးဖမ်းရာတွင်ချောင်းများအဖြစ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။. ဖိုက်ဘာမှန်များနှင့်ဖိုက်ချပ်ချောင်းများတိုးပွားလာသော်လည်းငါးဖမ်းရန်ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်သောချောင်းများသည်ရေပန်းစားသည်. ၀ ါးပစ္စည်းများကြံ့ခိုင်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုတို့ကြောင့်ဤအကြောင်းပြချက်သည်အလွန်ကောင်းသည်. ၀ ါးသို့မဟုတ်ခွဲထားသောကြံချောင်းများသည်သူတို့၏လှပသောပုံစံဖြင့်လူသိများသည်, အစိုင်အခဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်, ခွန်အားနှင့်၎င်းသည်ယင်ကောင်ငါးဖမ်းသူများအတွက်ပေးသောကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်. ၀ ါးဖြင့်ပြုလုပ်သောချောင်းများသည်ယနေ့တိုင်အသုံးပြုနေရသည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်သည်, လှံတံတစ်ချောင်းကိုသုတ်သင်ခြင်းနှင့်ပြီးအောင်လုပ်ခြင်းသည်အချိန်များစွာကြာမြင့်ပြီးယင်း၏အရည်အသွေးသည်သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ. အဆင့်မြင့်ယင်ကောင်ငါးဖမ်းသူများအတွက်, ဝါးချောင်းတွေကိုဖိုက်ဘာမှန် (သို့) ဂရပ်ဖိုက်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေထက်များသောအားဖြင့်ရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။. သို့သော် ၀ ါးချောင်းများကိုလည်းရွေးချယ်ခြင်းသည်စျေးကြီးသည်. အရည်အသွေးမြင့်မားသောချောင်းများသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အထိကုန်ကျနိုင်သည်. ခေတ်မှီဆောက်လုပ်သူများပြုလုပ်သောလှံတံများသည်ကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သောကြံကြံချောင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုပြင်းထန်သည်။ အချောထုတ်ကုန်တစ်ခုသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောတံတားများလောက်ကုန်ကျနိုင်သည်။. ကသတ္တုများပုံသွန်းမှကြွလာသောအခါ, ဝါးချောင်းတွေကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးပါ. အပန်းဖြေရန်အတွက်ယင်ကောင်ငါးမျှားခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူများသည်ပျော့ပျောင်းသောသို့မဟုတ်နှေးကွေးသောပုံစံကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရပြီး၎င်းသည်ဤဝါသနာကိုယှဉ်ပြိုင်သူများ။, ဝါးလှံတံသည်ရေချိုငါးဖမ်းခြင်းအခြေအနေတွင်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်. ဝါးနှင့် Split ကိုကြံလှံတံ
အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစား Chat ခေါင်းဆောင်များ
အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားနည်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာကစားသမားများကစားနေစဉ်အချင်းချင်းစကားပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်. ချက်တင်အခန်းသည်တာဝန်ဝတ္တရားရှိသောစကားဝိုင်းခေါင်းဆောင်ထံမှအကူအညီတောင်းရန်နေရာလည်းဖြစ်သည်. ရပ်ရွာအခြေပြုအွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားနည်းသည်ဂိမ်းအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. chat room တွင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများကိုကစားနေသည့်ဘင်ဂိုကစားနှင့်အတူကစားနေသည်, ဤဂိမ်းများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည် chat ခေါင်းဆောင်၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. ချက်တင်ခေါင်းဆောင်သည်အလွန်အလုပ်များသူဖြစ်ပြီးလုပ်ရန်လိုသည် 100 တိုက်ခိုက်ရေးကစားသမားများအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဂိုးသမားဖြစ်ခြင်းမှတပြိုင်နက်အမှုအရာ, အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားခန်းသို့ကစားသမားများကိုကြိုဆိုသည်, ကစားသမားများကိုသူတို့၏မေးမြန်းချက်များနှင့် chat room ဂိမ်းများကိုကြီးကြပ်ခြင်း. ကစားသမားတစ် ဦး သည်အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားစကားပြောစက်ကိုအသုံးပြုသောအခါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုရှိကြောင်းသတိပြုရမည်. အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားသမားများသည်အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစား chat ခန်းများသုံးသည့်အခါအောက်ပါအချက်များကိုသတိပြုရမည်: 1) အကယ်၍ သင်သည် chat ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးနေပြီးသူတို့သည်ချက်ချင်းအဖြေမပေးပါ, ကျေးဇူးပြုပြီးစိတ်ရှည်ပါ၊ သူတို့ဟာအရမ်းအလုပ်များတဲ့လူတွေပါ, သိပ်အလုပ်များလွန်းတယ်ဆိုရင်နောက်မှမေးခွန်းမေးကြည့်ပါ ဦး. 2) အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားသမားများသည်စကားဝိုင်းခေါင်းဆောင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုလေးစားရမည်. 3) စကားဝိုင်းခေါင်းဆောင်များသည်အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားခန်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာသောမည်သည့်ပြproblemနာကိုမဆိုကူညီလိမ့်မည်. 4) အွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်ဘင်ဂိုစကားပြောခန်းတွင်စကားဝိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုပိုမိုမြင်သာစေရန်စာလုံးကြီးဖြင့်ရေးသည်, ကစားသမားချင်းတွေကိုရှုပ်ထွေးအောင်မရေးဖို့ယဉ်ကျေးတဲ့အတိုင်းစာလုံးကြီးမရေးဖို့ကြိုးစားတယ်. 5) အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားသမားများသည်စကားဝိုင်းခေါင်းဆောင်အယောင်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုရှောင်ရမည်, ဖမ်းမိလျှင်သင်ကစားခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားနိုင်သည်. ဤယဉ်ကျေးမှုများကချက်တင်ခေါင်းဆောင်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။ အားလုံးအတွက်ပျော်စရာကောင်းသောအွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားငွေကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်. အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစား Chat ခေါင်းဆောင်များ
ဂေါက်သီးသုံးကိရိယာကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး? ကြောင်းသင်၏အာရုံကိုဖမ်းခဲ့ပေ? ငါမျှော်လင့်ပါတယ်. အခုဆက်ဖတ်ပါ. နောက်နေ့ကျရင်ငါ Golf Channel ကိုကြည့်နေတုန်းသူတို့ဟာနောက်ဆုံးပေါ်အကြီးမြတ်ဆုံး drives တွေ၊. ဒီဂေါက်သီးသုံးကိရိယာ (နည်းပညာအသစ်) ကြောင်းလက်မှလုံးဝဆည်းပူးခဲ့သည်, ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုပိုက်ဆံတစ်တန်အောင်နေတယ်. အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအားနည်းချက်ကိုဖမ်းစားနိုင်လို့ပါ, စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောဂေါက်သီးကစားသမားသည်ဂေါက်သီးရိုက်စက်များမှတစ်ဆင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကစားနည်းကိုရှာဖွေရန်. ဒီမှာကျွန်တော့်အမဲသားပါ! အလုပ်မလုပ်ပါဘူး! ငါသည်ဤကုမ္ပဏီများမှနေ့စဉ်ငါဂေါက်သီးတွေ့မြင် '' အရာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး, ဂေါက်သီးကိရိယာအသစ်များဝယ်ယူခြင်းနှင့်မည်သည့်ပိုကောင်းသောကစားခြင်းကိုမဆိုလုပ်ခြင်း. ဒါဟာပျမ်းမျှဂေါက်သီးဟန်းဒီးကပ်ကျော်ကျဆင်းသွားမထားဘူးဆိုတာလူသိများတဲ့အချက်ပါပဲ 20 နှစ်ပေါင်း! ဒါဟာသင်၏ game'it ရဲ့သင်တိုးတက်စေရန်သွားမယ့်ပစ္စည်းကိရိယာများမဟုတ်ပါဘူး! သင်ကကလပ်ကိုလွှဲ. သငျသညျအကွာအဝေးသို့မဟုတ်သင်တန်းအထိပြသပါ. ၎င်းသည်သင်၏လက်ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်၍ သင်မည်မျှကောင်းမွန်စွာ swing'and မည်မျှရှိသည်ကိုမူတည်သည် 18 တွင်း. ဒါကသင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်နေပါသလား? သငျသညျမကြာသေးမီကကလပ်အသစ်ဘယ်နှစ်ယောက်ဝယ်ကြပြီ? အဲဒါကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့သင်ခွင့်ပြုခဲ့သလား? ရိုးသားပါ. သင်၏မာနကြောင့်ထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ခွင့်မပြုပါနှင့်. အချက်အလက်များကိုသာဖော်ပြပါ. သင့်ရမှတ်များနည်းနေတယ်? သင်ပိုကောင်းတဲ့ကိုက်ညီမှုနှင့်အတူလွှဲသလား? သင်၏တိုးတက်မှုကိုမြင်တွေ့ရန်သေချာစေရန်သင့်ကိုယ်သင်အမြဲတမ်းမေးရန်မေးခွန်းများဖြစ်သည်. သငျသညျ nothenhen မဟုတ်ပါဘူးလျှင်သင်၏ပိုက်ဆံချွေတာနှင့်သင်အလုပ်လုပ်ကြသည်! သင်၏ဂိမ်းသည်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များပေါ်တွင်မူတည်နေသည်, ဂေါက်သီးသုံးပစ္စည်းများနှင့်မလျော်ကန်ပါ. ဂေါက်သီးစက်အလုပ်မဖြစ်ဘူး
သမိုင်း: ကရာတေးသည်ဂျပန်ကိုယ်ခံပညာနှင့်ဆက်နွယ်သည်, ၎င်း၏မူလအစသည်အိုကီနာဝါတိုက်ခိုက်ရေးနည်းစနစ်များနှင့်တရုတ်တောင်ပိုင်းကိုယ်ခံပညာများ၌တည်ရှိသည်. ၎င်းသည်အနုပညာနှစ်မျိုးလုံး၏ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် 1921. ဒီကာလအတွင်း, ကရာတေးဟုလူသိများခဲ့သည် “ရန်”, သို့မဟုတ်လက်, အဆိုပါ Okinawans အားဖြင့်ခေါ်အဖြစ်. တရုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်ကရာတေး၏မူလသင်္ကေတတွင်ထင်ရှားသည် – က “တန်လက်” သို့မဟုတ် 'တရုတ်လက်'. အစောပိုင်းကာလများ၌တိကျသောသို့မဟုတ်တိကျသောကရာတေးစတိုင်များမရှိခဲ့ပဲ Shuri-te အဖြစ်သာယေဘူယျအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်, Naha-te နှင့် Tomari-te, သူတို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာအတွက်သုံးမြို့ကြီးများပြီးနောက်အမည်ရှိ. မြို့တိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများရှိသည်, အခြေခံမူ, ကရာတေးစနစ်နှင့်အစဉ်အလာ. နိဒါန်း, လူကြိုက်များခြင်းနှင့်ဂျပန်သို့ကရာတေးခေတ်မီခြင်းကို Funakoshi ကိုအဓိကအသိအမှတ်ပြုသည်, တစ်ခုအိုကီနာဝါမာစတာ, များစွာသောယောဂီများက 'ခေတ်သစ်ကရာတေး၏ဖခင်' အဖြစ်မှတ်ယူကြသည်. သူ့ခေတ်ရှိကရာတေးပညာရှင်များတွင် Kenwa Mabuni လည်းပါဝင်သည်, Miyagi Chojun, Choshin Chibana, နှင့် Motobu Choki. ဂျပန်သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကကရာတေးကိုဘာသာရပ်အဖြစ်စတင်သင်ကြားခဲ့ပြီးစစ်တပ်မှစစ်သားများကိုမကြာခဏလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်. ဤကာလအတွင်းတက္ကသိုလ်များစွာသည်ကရာတေးကလပ်အစီအစဉ်များကိုစတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြိုင်ပွဲများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်. အနောက်နိုင်ငံများတွင်ကရာတေးသည်လူကြိုက်များမှုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးဂျပန်နှင့်အိုကီနာဝါကိုအမေရိကန်စစ်တပ်မှသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်, နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး. ကရာတေး၏အခြေခံများ: ကရာတေးအဓိကအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောလာကြတယ်အဖြစ်မတည်ငြိမ်သောတိုက်ခိုက်ရေးနည်းစနစ်အပေါ်အလေးပေး, ကန်, ဒူးနှင့်တံတောင်ဆစ်သပိတ်, နှင့်လက်နည်းလမ်းများဖွင့်လှစ်. စည်ကား, ပူးတွဲခြယ်လှယ်, သော့ခတ်, ကန္တာရ, ပစ်, နှင့်အရေးကြီးသောအချက်သပိတ်မှောက်လည်းဒီစည်းကမ်း၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်. ကရာတေးသင်တန်းကိုအဓိကအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲထားသည် ‘ ‘ Kihon သည်အခြေခံနည်းစနစ်များလေ့လာခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ ‘ Kata သို့မဟုတ် 'ပုံစံ', ရွေ့လျားမှု၏ပုံသေ sequence ကို, kata ဖော်ပြသည့်တိုက်ခိုက်ရေးအခြေခံမူများနှင့်အတူတကွဆက်နွယ်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်နည်းစနစ်များဖြစ်သည်. ‘ Kumite သို့မဟုတ် ar sparring’ ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောကာတာမှပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်. အဆိုပါယူနီဖောင်း ‘ ခါးပတ်နှင့်ရာထူးအရောင်: ကရာတေးယူနီဖောင်းသည်အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး Kimono ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် (ရှပ်အင်္ကျီ), Dogi သို့မဟုတ် Keikogi (ဘောင်းဘီ) နှင့်ခါးပတ် (အဖြူသို့မဟုတ်အရောင်), Jigoro Kano မှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်, ဂျူဒိုတည်ထောင်သူ. ခါးပတ်၏အရောင်သည်လေ့ကျင့်သူတစ် ဦး ၏ရာထူးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်သည်. လေ့ကျင်းပစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ, အဖြူရောင်ခါးပတ်များသည်အစပြုသူများအတွက်ဖြစ်သည်, နှင့်အမြင့်ဆုံးရာထူးအဘို့အနက်ရောင်. ဒါ, ဟုတ်တယ်, အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားနိုင်သည်. ခါးပတ်၏အရောင်နှင့်ဆင်တူလျှင်ပင်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပိုင်းခွဲများရှိနိုင်သည်. စတိုင်များနှင့်အပြောင်းအလဲများ: ကရာတေးစတိုင်များကိုရိုးရာနှင့်ပြည့်စုံသောကရာတေးအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်. ရိုးရာပုံစံများသည် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကာလတွင်တီထွင်ခဲ့သော Shotokan ကဲ့သို့သောမျိုးကွဲများဖြစ်သည်, Goju-ryu, Wado-ryu, Shito-ryu, Kushin-ryu, နှင့် Shindo Jinen Ryu. အပြည့်အဝဆက်သွယ်နိုင်သည့်ကရာတေးတွင် Kyokushin-kaikan နှင့် Kansuiryu စတိုင်များပါဝင်သည်. စတိုင်လ်အတော်များများတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည့် offshoots များရှိသည်. သဘောတရားတစ်ခုလုံးရှိနေဆဲပေမယ့်, တစ်ခုချင်းစီကိုကိုယ်စားပြုမှုအချင်းချင်းကွဲပြားခြားနားသည်. ကရာတေး၏သမိုင်းနှင့်အခြေခံများ
ဂရုတစိုက်စီစဉ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်ရေခဲငါးဖမ်းခြင်းကိုသင်၏ဘ ၀ ၏အကြီးမားဆုံးသောအချိန်ကာလသို့မဟုတ်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်. လွယ်ကူပါတယ်? အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုကြည့်ပြီးထိုငါးများကိုသင်ဖမ်းရန်မည်မျှပြင်ဆင်ထားသည်ကိုကြည့်ပါ! အစောပိုင်းဝယ်ခြင်းပြီးခဲ့သည့်ရာသီကသင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ပစ္စည်းများကိုစာရင်း လုပ်၍ စောစီးစွာဖြည့်ပါ. သငျသညျသူအပေါငျးတို့ Glo-Buster Bluelights သို့မဟုတ် Lindy Tazers ရသေချာအောင်လုပ်ပါ. သင်မှတ်မိရမည့်အချက်မှာစကားလုံးလေးလုံးသာရှိသည်: တက်သည်, စတော့အိတ်ချိန်း. ရေခဲကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်အပေါက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ရိုးရိုးလေးထားပါ, အပေါက်သန့်ရှင်းကြောင်းသေချာပါစေ. ရေခဲတုံးများသို့မဟုတ်ရေခဲတုံးများသည်လူတစ် ဦး ၏ငါးဖမ်းလိုင်းတွင်ချည်နှောင်ခြင်းများကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးသင့်အားငါးဖမ်းမိနိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်စေ၊, ဤအချက်များကြောင့်မျဉ်းကြောင်းပြိုကွဲသွားနိုင်သည့်အတွက်၊. မည်သည့်အတားအဆီးမှအပေါက်မပျက်စေရန်သတိရပါ. ငါးမျှားပါ, ရိုးရိုးလေးရလိုက်ပါ: ဖယောင်း worms, မှော်ဆရာ, ဆင်တူတဲ့ PowerBait, ခုန်. Coleman အသေးစားကဲ့သို့သောအအေးများကို သုံး၍ ဤငါးစာကိုတတ်နိုင်သမျှရှင်သန်စေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. အားလုံးသန့်ရှင်းရေးသင်အသုံးပြုမည့်ချောင်းများနှင့်ငါးဖမ်းစက်များကိုစစ်ဆေးပြီးရှင်းလင်းပါ. Q-tips သည်သင်၏ရေခဲလှံတံ၏ nook နှင့် cranny တိုင်းတွင် nick များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ငါးဖမ်းနိုင်သောငါးဖမ်းစက်များအတွက်ရေခဲအေးခဲစေသောရေနံကိုအကြံပြုလိုသည်. အပူတက်သည်ထိုအပူပေးစက်များနှင့်ပရိုပိန်းဆလင်ဒါပေါင်နှင့်ပေါင်များကိုယူရန်မမေ့ပါနှင့်. သူသို့မဟုတ်သူမသည်ရေခဲအောက်ရှိငါးများကဲ့သို့အအေးဖြစ်ပါကလူတစ်ယောက်သည်အဆင်ပြေစွာငါးမျှားနိုင်သည်. ရေခဲငါးဖမ်းခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသင့်သည်. House up အိမ်ရေခဲကြမ်းတမ်းပြီးအေးသည်သို့သော်သင်လည်းထိုအတိုင်းခံစားရမည်ဟုမဆိုလိုပါ. ရေခဲတဲများကိုအဆစ်များ၌ချောချောမွေ့မွေ့ထည့်။ သန့်စင်သင့်သည်. မည်သည့် wear သို့မဟုတ်မျက်ရည်ရှိလျှင်, ၎င်းတို့သည်သင့်လျော်သောပြုပြင်ရေးကိရိယာများပေးပို့ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်, လိုအပ်သောအဖြစ်. Gear Up စိတ်မကောင်းခြင်းထက်လုံခြုံမှုရှိခြင်း, သငျသညျအသက်ကယ်သမား spike အစုတခုနှင့်တစ် ဦး လုံခြုံကြိုးရသေချာအောင်. ဒါ့အပြင်, အအေးမိခြင်းကိုခံစားရခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအေးမြခြင်းတို့ဖြစ်ရန်, Carhartt အစွန်းရောက်အာတိတ်ဂျာကင်အင်္ကျီမှငါးဖမ်းအဝတ်အစားကိုကောက်ယူပါ. သင်၏ခြေချောင်းများနှင့်ခြေထောက်များတွင်နှင်းခဲခြင်းကိုရှောင်ပါ, အကောင်းဆုံးဖိနပ်များသည်နွေးထွေးသောနွေးထွေးစေရန်အိုင်းရစ် Setters Versa Trax ဖြစ်သည်. ရေခဲငါးဖမ်းမည်သူမဆို?
Once upon time, the Nets wasted draft picks on stiffs like Yinka Dare. Players with modest talent such as Chris Morris had the gall to write ‘trade me’ on their sneakers. Players with more talent but not nearly as much as they thought, like Stephon Marbury, wrote ‘All Alone’ on their ankle tape. And throughout all this, fans and New York media alike responded with Derrick Coleman-like enthusiasm: whoop-de-damn doo. Then after the 1999-00 ရာသီ, Rod Thorn took overaNets team that desperately needed someone with his professionalism and player evaluation skills. Rod Thorn’s first major move was to select Kenyon Martin as the number one pick in the draft. While Martin suffered through an injury-plagued first season, by his second season he wasamajor defensive presence andahuge part of their running offense. In 1984, Rod Thorn made what was clearly his best draft pick while GM of the Bulls, selecting Michael Jordan. သို့သော်, in 2001, after having one full season to evaluate the Nets’ needs, Rod Thorn had what would have to be considered the best off-season of his career. The Nets drafted Eddie Griffin and then turned around and dealt him for three picks which they turned into Richard Jefferson, Jason Collins, and Brandon Armstrong. Richard Jefferson turned into one of the Nets’ brightest stars. A great athlete who plays outstanding defense, Jefferson is also one of the league’s most efficient scorers, getting 19.5 points on fewer than 13 shotsanight. Jason Collins doesn’t wow you if you look at the stat sheet, but he does so many little things when he is on the court, he is well respected by his teammates and consideredawinner throughout the league. Brandon Armstrong,areported sharp-shooter who can’t shoot, offered less of an impact. But it was Thorn’s trade that off-season that really turned things around. Thorn traded talented but selfish potential superstar Stephon Marbury for an older Jason Kidd. Kidd instantly energized the franchise, guaranteeingawinning record the year he joined the franchise. Kenyon Martin, Kerry Kittles, and Keith Van Horn immediately improved their game and Jefferson and Collins’ NBA initiation couldn’t have gone smoother with Jason Kidd leading the charge. The reenergized franchise made it to the NBA Finals in both 2002 နှင့် 2003, ultimately losing to more talented Western Conference foes (Los Angeles Lakers and San Antonio Spurs). Thorn madeacouple of errors along the way in his quest to findabona fide center. He traded Keith Van Horn foramiscast Dikeme Mutombo, who never fit in with the Nets running style, and then signed Alonzo Mourning toaterrible 4-year, 20-million-dollar contract only to see him miss most of the season due to his kidney ailment. သို့သော်, the Nets look like they have finally found their center in Nenad Krstic whom they drafted in 2002 and stashed in Europe foracouple of years to develop his game. Krstic has become an offensive force for the current Nets, averaging 13.5 points per game onabetter than 50% FG percentage. Thorn also saved the Nets’ organization when they were in danger of sliding back into the abyss. Faced with demands from ownership to cut costs, Thorn shipped off Kenyon Martin, Kerry Kittles, and Lucious Harris. Fans were outraged, but Denver is now stuck with Martin’s bloated contract, and Kerry Kittles is semi-retired after playing only 11 games last year. Thorn made the correct choice in Richard Jefferson over Kenyon Martin, and then made another great move by stealing Vince Carter from Toronto for the incredible bargain price of Eric Williams, Aaron Williams, Alonzo Mourning (who refused to suit up for Toronto), andacouple of harmless draft picks. The Nets start their series against the Miami Heat equipped with three superstars acquired by Thorn andabudding fourth in Krstic, also drafted by Thorn. While you could quibble with his bench choices that backfired this year (Mark Jackson and Jeff McInnis), the Nets are surely thrilled to have this Thorn on their side. A Thorn on Their Side
စပိန် Grand Prix 2006
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် Fernando Alonso သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်မြေတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်. Alonso သည်ဘာစီလိုနာတွင်စပိန် Grand Prix အသင်းနှင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည် 130,000 မျက်မြင်သက်သေများအဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ (မေလ ၁၄ ရက်). Formula One Grand Prix သည်စပိန်တွင် Alonso ပြိုင်ပွဲမဝင်မှီအထိလူကြိုက်များခြင်းမရှိခဲ့ပါ. ၎င်းတွင် Mansell ကဲ့သို့အရေးကြီးသောလေယာဉ်မှူးများရှိသော်လည်း, Senna နှင့် Schumacher. ဥပမာ, Jerez မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဥရောပ Grand Prix. သာ 20,000 ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ရပ်မှတက်ရောက်ခဲ့သည်. သို့သော်ငြားလည်း, 100,000 ကြည့်ရှုသူတို့သည်ညီမျှသောစက်ဘီးပြိုင်ပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်. စပိန် Grand Prix သည်, လက်မှတ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထွက်ရောင်းခဲ့သည်. ဒီဟာအသစ်တစ်ခုပါ, Formula One ဖြစ်ရပ်များကိုစပိန်ရှိရုပ်သံလိုင်းငယ်တစ်ခုဖြင့်သာအမြဲတမ်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းယခုအခါကြီးမားသောနိုင်ငံတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာပရိသတ်များထံရောက်ရှိလာသည့် TVE ဘူတာရုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. Alonso ပြောခဲ့သလိုပါပဲ, သူကပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကခေါင်းစဉ်အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ခုသူသည်မိမိနိုင်ငံတွင်အလွန်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးကတည်းကသူ့ကိုပိုကောင်းခံစားရစေသည်. သူ၏နိုင်ငံသားများကိုသူမအနိုင်ရသည်ကိုမြင်ရသည့်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပေးခဲ့သည်. ဖာနန်ဒို Alonso Diaz, အဘယ်သူသည်ဇူလိုင်လ 29 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်, 1981 Oviedo စပိန်၌တည်၏, သူဖြစ်သည့်အခါကမ္ဘာ့ယာဉ်မောင်းရဲ့ချန်ပီယံဆုကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည် 24 နှစ်ပေါင်းများစွာ, အငယ်ဆုံးဖော်မြူလာချန်ပီယံဖြစ်ခြင်း၏အီမာဆန် Fittipaldi ရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖောက်. ဒီအောင်ပွဲနှင့်အတူ, Alonso သည်လည်း M ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်. ငါးနှစ်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံ၏ Schumacher ရဲ့ပြေး. ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မှာ Renault အဘို့အပြေးသူသည် Alonso, ချီးမြှင့်ခဲ့သည် 2005 အားကစား၏ Asturias ဆု၏မင်းသား, Alonso နှင့် McLaren ၏ကျောင်းအုပ်ကြီး Ron Dennis ဆုကိုရရှိရန်အသက်အငယ်ဆုံးသူသည်ဒီဇင်ဘာလတွင်ကြေညာခဲ့သည် 2005, ဖာနန်ဒိုအတွက် McLaren သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်ဟု 2007 ရာသီ. စပိန် Grand Prix 2006
Philip Rivers : 2004 နေ့ပုံမူကြမ်း
Philip Rivers was born on December 8, 1981 in Decatur, Alabama. Rivers is one of the best young quarterbacks in the world, and he has proven this time and time again on the field. Not only does he have all of the physical tools needed byagood quarterback, but he is also one of the smarter players in the game as well. When you combine these two things it is easy to see why he will beagreat player in the NFL for many years to come. Rivers attended Athens High School, and excelled both in the classroom and on the football field. Asasenior he played both safety and quarterback, and this led to him being named the Alabama Football Player of the Year. After high school Rivers chose to take his game to North Carolina State University. During his days playing for the Wolfpack, Rivers broke nearly every school and conference record. Perhaps his greatest record is that for most games started byacollege quarterback with 51. This not only showed his consistency, but also his determination to lead his team game in and game out. Rivers led the Wolfpack to four bowl games, and came home with wins in three of them. Rivers was drafted by the New York Giants with the fourth pick in the 2004 NFL မူကြမ်း. Shortly thereafter he was traded to the San Diego Chargers for fellow quarterback Eli Manning. Afterabit ofadelay, Rivers finally signedasix year contract worth $40.5 သန်း. စဉ်အတွင်း 2004 season Rivers saw limited action, appearing in only two games. The 2005 season was more of the same as he was not able to beat out Drew Brees for the starting quarterback position. Rivers was finally named the starting quarterback in 2006 after Brees departed for New Orleans. During his first season asafull time starter Rivers put up solid numbers. He didavery good job managing the game which was evident by the Chargers 14-2 စံချိန်, and AFC West Championship. Philip Rivers : 2004 နေ့ပုံမူကြမ်း
Teddy bears date back to the early twentieth century, but the origin of the name is uncertain. The most popular story is that then-US President Theodore ‘Teddy’ Roosevelt refused to kill an injured bear onabear-hunting trip, choosing to spare its life instead. This story was then picked up by the newspapers, especially cartoonists, leading one enterprising shop that sold toy bears to label them ‘Teddy’s Bears’ in the window. The original teddy bears are generally considered to come from Germany, where they were made by the Steiff company and exported to the US. Unlike previous attempts at toy bears, they were not fierce looking, with the makers instead going foramore appealing, although unrealistic, cute look. The bears were an immediate huge seller, withacraze that you could easily compare to the ’90s Beanie Baby fever, and teddies today are still the biggest-selling toy animal by far. As teddies were still being handmade rather than mass-produced, this led toahuge number of people becoming employed in bear-making almost overnight. During the First World War, teddy bears from Germany were impossible to get, which led other countries to start producing them and building up their own unique teddy styles. The Second World War, သို့သော်, led toadecline in teddy bear manufacture, as the resources simply couldn’t be spared, and it wasn’t until the ’50s that they became popular again. When they came back, သော်လည်း, it was withavengeance, just like bananas and other things that had been unavailable during the war. ဒီနေ့, we are still in this age of teddy mass production. Teddy bears have since become an enduring children’s toy, as well asapopular theme of children’s stories, such as Paddington Bear, Winnie the Pooh and the Teddy Bears’ Picnic. Because of many adults’ nostalgia for the pre-war hand-crafted bears,awhole industry of ‘bear artists’ making expensive, individual bears has sprung up alongside the cheap toys, and teddy bears remain popular as gifts as well. TeddyBears – Did you know?
ဂျယ်ရမီ Shockey : 2002 နေ့ပုံမူကြမ်း
Jeremy Shockey ကိုသြဂုတ်လတွင်မွေးဖွားခဲ့သည် 18, 1980 Ada ၌တည်၏, ဥက္ကလာဟိုးမား. At6ခြေထောက်5လက်မနှင့် 250 ပေါင် tShockey သည်ထိပ်ဆုံးထစ်အားအဆုံးအတွက်အကောင်းဆုံးသောအရွယ်အစားဖြစ်သည်. သူ၏မြင့်မားသောအားကစားနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ Shockey သည်သူ၏ရာထူးနေရာတွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူတွေ့မြင်နိုင်သည်။. ထို့အပြင်သူသည် NFL ၌ကောင်းမွန်သောကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်သာမကဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်သူကသူ့အထက်တန်းကျောင်းကာလကတည်းက ဦး ခေါင်းလှည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. အထက်တန်းကျောင်းအပြီးတွင် Shockey သည်သူ၏ဂိမ်းကိုမိုင်ယာမီတက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. အဆိုပါကျောင်းသည်ကြီးစွာသောတင်းကျပ်စွာကြီးစွန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်, နှင့် Shockey သူအချိန်သင့်လျော်သောငွေပမာဏ၌သွင်းထားလျှင်သူသည်လိုင်းနောက်တစ်နေ့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိသည်. သူကတစ် ဦး freshman အဖြစ်အများကြီးလုပ်ဖို့မရခဲ့ပေမယ့်, မိမိအဒုတိယနှစ်ရာသီအတွင်းအမှုအရာပြောင်းလဲသွားတယ်. သူဟာမုန်းတီးတဲ့ပြိုင်ဘက်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကိုအနိုင်ရတဲ့အနိမ့်ဆုံးကစားကွင်းကိုဖမ်းမိပြီးနောက်ဒါဟာအထူးသဖြင့်မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်. မိမိအဒုတိယနှစ်ရာသီအတွင်း Shockey ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကွန်ဖရအတွက်နည်းပြများကပထမ ဦး ဆုံးအသင်း All-Big အရှေ့အမည်ရှိခံရဖို့သူ့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်, အဖြစ်အများအပြားအမျိုးသားရေးစာပမြေား. အငယ်တန်းအတွက် 2001 အမျိုးသားချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရရန်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအားကူညီရာတွင် Shockey သည်အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ထိုရာသီအတွင်းသူသည်အသင်းကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည် 45 ထက်ပိုမိုများအတွက် rece ည့်ခံ 600 ကိုက်. ထို့အပြင်သူကဆက်ပြောသည် 8 touchdowns အတွက် 2001. ရာသီပြီးနောက် Shockey ထပ်ဆုများနှင့်အတူမိုးခဲ့သည်, အရာအလှည့်အတွက်သူ့အရည်အချင်းပြည့်မီကြေညာသူ့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည် 2002 NFL မူကြမ်း. Shockey အားနယူးယောက်ခ်ကုမ္ပဏီကြီးများမှရွေးချယ်ပြီး ၁၄ ခုလုံးကိုမူကြမ်းတွင်ရွေးသည်. သူကအစောပိုင်းကတည်းကအထင်ကြီးလာတယ်, ဒါကသူ့ကို Pepsi လူသစ်ဆုချီးမြှင့်မှုကိုရရှိစေခဲ့တယ်. သူ၏ပထမဆုံးရာသီ (၅) ရာသီအတွင်းတွင် Shockey အား NFL Pro Bowl အသင်းကိုအမည်ပေးခဲ့သည်. သူသည်ပရီးမီးယားလိဂ်၌အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူထူထောင်ခဲ့သည်. ဂျယ်ရမီ Shockey : 2002 နေ့ပုံမူကြမ်း
Joana’s 1-60 Horde Leveling Guide Review – ကောင်းလားဆိုးလား?
I decided to write this Joana’s 1-60 Horde Leveling Guide review after havingachance to see what the guide can do for those who are into the World of Warcraft. Can you get to 60 in as little as four or five days? I seek to answer this question and more about the guide in this review, all with the goal of giving you the best idea possible of what you can realistically expect to get out of purchasing this product. The first thing to note about Joana’s 1-60 Horde Leveling Guide is that it is more than justatext manual that will help you get toahigher level faster than you ever thought possible. It also comes withacomplete 1-60 ဗီဒီယို, showing how Joana got to level 60 in suchashort period of time. 35 hours in combined length, the videos show you what the guide tells you. The two areapowerful resource to use, especially given that the video has titles added to let you know what’s going on, what level Joana was on and what quests she was doing. Joana’s 1-60 Horde Leveling Guide lists in detail the exact methods used to get from level 1 ရန် 60, with the quests linked to both thottbot and allakhazam for easy references on how to do the quests. Well organized and with pictures, the illustrations alone are extremely helpful in finding everything in the game world. Best yet, all starting areas are covered, from Orc to Undead to Blood Elves. Hunter specific tips and tricks are all detailed, and there is even an entire section set aside just for general strategies used to level faster. I highly recommend Joana’s 1-60 Horde Leveling Guide to anyone who is enthusiastic about World of Warcraft. The guide is extremely affordable, especially when you factor in all of the time you’ll be saving by using it. A constantly evolving game, Joana’s guide comes with free 1-70 horde leveling guide updates, so you’ll remain in-the-know, even after you exceed 60. Joana’s 1-60 Horde Leveling Guide Review – ကောင်းလားဆိုးလား?
ငါးမျှားခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သမုဒ္ဒရာလှေလှော်ခြင်း၏အထီးကျန်ဆန်သောအရာနှင့်တူသောအရာမရှိပါ. သငျသညျသမုဒ္ဒရာယပ်လှေငါးဖမ်းအံ့သြဖွယ်အသံမစဉ်းစားပါနဲ့? မည်သူမဆိုလုပ်နိုင်ပါတယ်, မသာပရော်ဖက်ရှင်နယ် kayaker မဟုတ်ပါဘူး! လိုအပ်သမျှအားလုံးမှာမှန်ကန်တဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်ပြီးသင်လမ်းပေါ်ရောက်နေနိုင်သည်. သမုဒ္ဒရာအလယ်မှာမင်းရဲ့လှေပေါ်မှာမျောနေတယ်ဆိုပါစို့, ငါးမျှားရသောနေ့တစ်နေ့ရှိခြင်း. သင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်! ဒီလိုမျိုး kayaking လုပ်ဆောင်မှုအတွက်အခြေခံ kayaking စွမ်းရည်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်. သင့်ရဲ့နောက်ကျောခြံမှာငါးဖမ်းခြင်းအကြားတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်, သင်၏ကယက်ကတ်တွင်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်သမုဒ္ဒရာ၌ငါးဖမ်းခြင်းသည်ကယက်ခြင်းဖြစ်သည်. သမုဒ္ဒရာပုံစံကယပ်လှေများသည်အခြားကယပ်လှေများထက်များစွာကုန်ကျသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်. ငွေကောင်းတဲ့ယပ်လှေဝယ်မယ်ဆိုတာသေချာစေချင်တယ်, ဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်မှာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းမရှိရင်သမုဒ္ဒရာဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်နိုင်တယ်. သမုဒ္ဒရာလှေကားထစ်များကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သူတို့အကြားရွေးချယ်ဖို့ခဲယဉ်းလိမ့်မည်. ကယက်လှေကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်ကောင်းစွာအသိမပေးလျှင်ခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်. လိုအပ်သည်ကိုသိခြင်းသည်အရေးကြီးသည်. သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်. သမုဒ္ဒရာပုံစံကယပ်လှေများသည်အခြားလှေများထက် ပို၍ တာရှည်ခံသည်. သမုဒ္ဒရာလှေစီးစီးများသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးမြန်နှုန်းအတွက်တည်ဆောက်ထားသည်. သင်နှင့်ထိတွေ့ရမည့်လှိုင်းအမျိုးအစားများကြောင့်သူတို့၌ကျောရိုးရှည်သည်. သင်၏ငါးဖမ်းကိရိယာနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများကိုသိမ်းထားရန်အလွန်ကောင်းသည့်သိုလှောင်ရာနေရာများလည်းရှိသည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့ကိုသင်ရေထဲမကျစေပါ. သမုဒ္ဒရာယိုယွင်းယိုယွင်းခြင်းကိုပင်လယ်လှေရောင်းဝယ်သူအများစုနှင့်သမုဒ္ဒရာငါးဖမ်းသည့်စတိုးဆိုင်များတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်. သူတို့ကနည်းနည်းပိုကုန်ကျတယ်၊. သငျသညျအကြီးအသမုဒ္ဒရာယပ်လှေဝယ်ယူကြတဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏ငါးဖမ်းစွန့်စားမှုစတင်ရန်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်. Kayaking သည်ငါးမျှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. သင်သွားလေရာရာ၌ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နှင့်ပျော်စရာကောင်းသောခရီးကိုဖန်တီးပေးသည်. ယခုထိုကြီးမားသောသမုဒ္ဒရာငါးများကိုစတင်ဖမ်းယူရန်အချိန်ရောက်လာပြီ. သမုဒ္ဒရာငါးမျှားရန်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာပါ, ကကယပ်တွင်
Golf startedalittle more than 500 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. It may have gone back as far as the roman days. The golf ball wasaleather pouch stuffed with feathers. Is it possible the kids back then started the game of golf by taking the feathers of their father’s arrows and stuffing their pouch, and usedaclub instead ofabow to get the curvilinear motion ofagame they really wanted to play? The Scottish Shepherds started playing golf back in Scotland, by hittingaleather ball stuffed with feathers. So many people played the game of golf in Scotland, that the government eventually stopped the game. The government wanted the people to practice archery, so they could be good enough to defend their country. Was stopping the game of golf altogetheramistake? Judging by the enthusiasm of how golf is moving forward today. They might have been better off stopping the use of the mashie and niblick golf club, and made it mandatory to use the bow and arrow instead. It would have accomplished two things. The people would have improved their archery skills, and for the people who continued using golf clubs, it would have speeded up golf play at the same time. All they had to do to make it safe was lengthen the tee time intervals. The wind may have been the only other dangerous factor. The biggest problem would have been getting an audience oracrowd to watch along the sidelines. Now takingalook at the similarities of golf and archery, one would think they went hand in hand. Both sports requireashaft, ပစ်မှတ်, distance and accuracy. The two sports are played withacurvilinear motion. Players from both sports have to useastraight arm andabent arm. The two sports have rounds to play. Both the arrow and golf ball are capable of going 400 yards or better inasingle shot. The tournaments included junior tournaments. Carrying either equipment is typically swung over the shoulder. The circle inatarget is the approximate size in width as the tin cup. Equipment for both sports is made with grooves in them. The one difference between the two sports that stands out the most, one requiresanock and the other requiresaniblick to play with? Similarities Of Golf And Archery
One of the most common questions to pop up from people looking to purchaseapocket bike for the first time is whether or not they are street legal. The general answer is no, and pocket bike racers point out that pocket bikes were never designed for street use, they were designed for track racing. Because of the diminutive size of pocket bikes, they are dangerous to use on public roads because many drivers can not see the bikes. သို့တိုင်, because of the speed they can reach, too many people either assume they are legal to use on public streets, or just ignore the rules. Pocket bikes are legal to own and race, but they are designed for private property or race tracks. Some states have gone to extreme measures to reinforce this point. Pocket bikes became major political issues in both Utah and Pennsylvania after individuals were badly hurt after an accident onapublic street. Both states passed laws specifically banning those vehicles from public streets. Sections of California have taken the same steps. Part of this response is due to the large increase in pocket bike sales. There are so many more pocket bikes around then evenafew years back. ကံမကောင်းစွာပဲ, with the increase in pocket bikes, there is alsoarise in the improper use of pocket bikes. These were designed for private property, and for racing, and are perfectly acceptable for both, but public streets were meant for basic transportation. So the long and short of the street legal question is that pocket bikes are not street legal. Even in states where the rules are not specifically stated, pocket bikes are still technically not street legal because they are not designed for license plates, turn signals, and lights. Even if your state has not specifically passed laws banning their use on public streets, it is stillagood idea to use the pocket bikes properly. Because of their small size and large speed, the pocket bikes can lead to bad accidents if used improperly, or even if there are used properly, accidents happen and it’s better to be with the ground than withacar. Play it safe, and pocket bikes can beafun, accident-free fun. The Street Legal Question
ယင်ငါးဖမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အားကစားငါးဖမ်းခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ လှည့်ဖျားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။. လှည့်စားခြင်းကို 'Fly' လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။’ သို့မဟုတ် 'ပုံစံ’ ၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမည်အဖြစ်. မြှူသည် အမွေးအမှင်ဖြင့် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။, သားမွေး, ဖဲကြိုး, ပုတီးစေ့များနှင့် ချိတ်တွင် ချိတ်ထားသော အခြားအတုပစ္စည်းများ. ယင်ကောင်တစ်ကောင်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပစ်မှတ်မျိုးစိတ်များကို ဆွဲဆောင်ရန် သို့မဟုတ် အတုယူရန်ဖြစ်သည်။. မြှူအတွက်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများသည် ရေထဲတွင် လက်တွေ့ဘဝ အင်းဆက်များအဖြစ် ပေါ်လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။. Fly Lure အမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်။. ရေထဲတွင် ယေဘူယျပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့် ယင်ငါးဖမ်းကျွမ်းကျင်သူများက အကြံပြုထားသော အချို့ပင်ရှိသော်လည်း ကိစ္စအများအပြားတွင်၊, အဆိုပါ ယင်ကောင်များသည် ရေထဲတွင် မတူညီသော လက္ခဏာများ ရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် သင့်ကိုယ်ပိုင် ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်တွင် အမှန်တကယ်မူတည်ပါသည်။. Crankbaits သည် 'ငှက်ခွေးများကဲ့သို့ ပြုမူနိုင်စွမ်းရှိသည်။’ ငါးအမဲလိုက်ခြင်း၌. crankbaits ကို အသုံးပြု, ရေထဲသို့ ခုန်ဆင်းပြီး အခြားသော မြှူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နစ်မြုပ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။. ဒါကြောင့် သင်ဟာ ရေနက်ပိုင်းငါးဖမ်းဖို့ လုပ်နေတယ်ဆိုရင်, crankbaits သည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။. ကြိုးအရှည်သုံးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။; ချောင်းများကြား 6.5 ရန်7ခြေထောက်များသည် စံပြဖြစ်သည်။. နောက်တစ်ခုကတော့ Jigging spoons လို့ခေါ်ပြီး 'structure lures' လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။. ဤမြှူအမျိုးအစားကို အတွေ့အကြုံရှိ ငါးဖမ်းသမားများက အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။. ၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာမှာ အပူချိန်မတည်ငြိမ်သော ရေနက်ပိုင်းအတွင်း မျိုးစိတ်များအတွက် ငါးဖမ်းသည့်အခါ အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည်။. spinnerbaits သည် မည်သည့်ငါးမျှားမျိုးတွင်မဆို အကောင်းမွန်ဆုံး မြှူအမျိုးအစားဖြစ်သည်။. လှံတံအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ကြိုးအမျိုးအစား သို့မဟုတ် spinnerbaits အသုံးပြုလိုပါက အဖုံးကိုပင် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။. ဒါ့အပြင်, spinnerbaits များကို ရာသီဥတုနှင့် ရေအမျိုးအစားမခွဲခြားဘဲ တစ်နှစ်၏အချိန်မရွေးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။. ဒါပေါ့, ကြည်လင်သော ရေငါးဖမ်းရန်အတွက်, Tube jigs ဟုခေါ်သော လှော်ခတ်မှု ရှိပါသည်။. ကြည်လင်သောရေတွင်နေထိုင်သောငါးများသည် လှုပ်ရှားမှုမရှိသော်လည်း ပြွန်ဂျစ်များသည် ကျဆင်းသွားသောငါးများနှင့်တူသောကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူများက ဤမြှူကိုအသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။. နောက်ဆုံး အကြံပြုထားသော ငါးဖမ်းမြှူများကို Vibrating lures ဟုခေါ်သည်။. ဤမြှူများသည် ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် နက်ရှိုင်းသော ရေထဲတွင် လျင်မြန်စွာ နစ်မြုပ်သွားတတ်သည်။. ဖမ်းလိုက်တာနဲ့, ဤဆွဲငင်မှုနှင့်အတူ ကြိုးကို ပြန်ဆွဲထုတ်ခြင်းက တုန်ခါမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပေးသည်။, ဒါကြောင့် နာမည်ပေးထားတာ။. Fly Lures
ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခြင်းသည်သင်၏ဂိမ်းကိုအကွာအဝေးတွင်သင်တောင်းသောအရာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှသာသင်၏ဂိမ်းကိုကူညီနိုင်သည်. အဲဒါရှင်းလား? ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုသွားရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးရောက်သည့်အချိန်ကထက်စိတ်ရှုပ်စရာများကိုသာထားခဲ့ရန်သင်၏နေ့ရက်မှအချိန်မည်မျှယူခဲ့သနည်း။? အခု on'be ရိုးသားပါ! အပျော်တမ်းကစားသမားတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရေတွက်နိုင်သည့်အကြိမ်များစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်. ဒါဘာကြောင့်လဲ? ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းနေပြီးတင်းကျပ်တဲ့အခါမှာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအသံလွှဲမလုပ်နိုင်လို့ပဲ. ဘောလုံးပုံးတစ်ပုံးကိုသင်ရိုက်သည့်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ. တစ်ခုလုံးကိုပုံးထဲက, ဘယ်လောက်လွှဲများတကယ်ကောင်းသောခံစားရတယ်, ပြီးတော့ဘောလုံးကမင်းလုပ်ချင်တာကိုလုပ်ခဲ့တယ်? ငါသည်သင်တို့ကိုတစ် ဦး ထက်နည်းလက်ပေါ်မှာသူတို့ကိုရေတွက်နိုင်ပါတယ်အလောင်းအစားပါလိမ့်မယ်. ဒါမှမဟုတ်ငါကြမ်းတမ်းစွာဖြစ်ခြင်းတာပါ, ပြီးတော့သူတို့ကိုနည်းနည်းပဲရေတွက်နိုင်တယ်2လက်တို့ကို. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, ဒီဂေါက်သီးအလေ့အကျင့် session တစ်ခုအတွင်းမှာဘုံဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်ပါတယ်. ငါ့ကိုမှားယွင်းကြောင်းမယူပါနှင့်။ ဂေါက်သီးအလေ့အကျင့်သည်သင်၏ဂေါက်သီးလွှဲခြင်းနှင့်အလုံးစုံသောဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်။, သင်၏ဂေါက်သီးကစားစဉ်အတွင်းသင့်အချိန်ကိုအများဆုံးအသုံးချနိုင်ခြင်း. ရဲ့အပြုသဘောဘက်မှာကြည့်ကြပါစို့! သငျသညျအကြှနျုပျ၏အကွံဉာဏျကိုယူ။ သင်၏ဂေါက်သီးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးတက်အောင်စတင်ပါ. မယူပါဘူး2ဒီပြီးမြောက်ဖို့အားကစားရုံထဲမှာတစ်ရက်နာရီနာရီ. ငါ၏အအစီအစဉ်များအားလုံး, dvds နှင့်စာအုပ်များတွင်သင့်အိမ်၌ဖြစ်စေ၊ ရုံးခန်း၌ဖြစ်စေလုပ်ဆောင်နိုင်သောတတ်နိုင်သောပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းထားသည်. ရလဒ်? သင်တစ် ဦး ဂေါက်သီးအလေ့အကျင့်စီစဉ်ထားလာမယ့်အချိန်စိတ်ကူးတတ်၏! သငျသညျဘောလုံးပိုသင်ချင်သောလမ်းကိုနှိပ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ဂေါက်သီးအလေ့အကျင့်ကိုမကျေနပ်သောကြောင့်မွေ့လျော်နေသည်. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဘွယ်ဂေါက်သီးအလေ့အကျင့် session တစ်ခုကနေအသစ်တစ်ခုကိုမြင့်မားပေါ်မှာနေသောကြောင့်သင်ပင်အသစ်တစ်ခုအကွာအဝေးကဒ်ဝယ်ယူရန်. ဒါက Total Golf Performance လို့ခေါ်ပါတယ်! သင်မကြာမီသင်၏လေးယောက်လွှမ်းမိုးလိမ့်မယ်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ '' လျှို့ဝှက်ချက် '' သိချင်ပါလိမ့်မယ်. သင်၏ဂေါက်သီးတိုးတက်မှုကိုဤချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ယူပြီးသင်၏ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်မှုမှအမြင့်ဆုံးအကျိုးကိုရယူပါ. ဂေါက်သီးအလေ့အကျင့်အရေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး’